Laascaanood: Dilal, salal siyaasadeed iyo colaad dul-hoganaysa magaalada; warbixin. – Radio Daljir
Laascaanood: Dilal, salal siyaasadeed iyo colaad dul-hoganaysa magaalada; warbixin.
Maarso 16, 2011 12:00 b 0
Laascaanood, Mar 16 – Khatar amni iyo jahwareer siyaasadeed ayaa in dhawaalaba daris la ahaa shacabka ku nool magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka sool, kadib markii ciidamadda Soomaliland ee mudada saddexda sano ah halkaasi ku sugnaa ay cadaadis dheeraad ah saareen dhaq-dhaqaaqa shacabka magaalada.
Dadweynaha gobolka Sool ayaa banaanbaxyo balaadhan ka dhigay guud ahaan gobolka, gaar ahaanna caasimadda Laascaanood, kuwaasi oo ay kumuujinayeen rabitaankooda iyo dareenkoodda masiiriga ah. Dhanka kale, waxaa batay dilalka loo geysanayo saraakiisha la shaqeeya maamulkaasi ee ku sugan Laascaanood, iyadoo saraakiil badan halkaasi lagaga laayey maamulka Soomaliland tan iyo xiligii ay halkaasi qabsadeen.
Magaalada ayaa shalay waxa lagu soo rogay bandoow iyada oo qaar ka tirsan haweenka ku nool magaalada Laascaanood oo Daljir la soo xariirayna ay tilmaamayaan in si aan kala sooc lahayn loo xiro dadka isku daya in ay cabiraan dareenkooda. Waxay sheegeen in xabsiga magaalada, oo ku yaal meel ku dhow gurigooda, lagu soo xiro caruur iyo dumar. Gabadh la hadashay Daljir ayaa sheegtay in aan xittaa loo ogalayn dadku in ay soo booqdaan ehelkooda la xiray. Waxay kaloo sheegtay gabadhu in baabuur badan ay la wareegeen ciidamada Soomaliland.
Gabar kale oo lagu magacaabo Canab ayaa iyadana sheegtay in dadka la soo xirxiro ay la kulmaan jirdil iyo in maxaabisita lagu khasbo, jirdil kadib in ayan mar dambe ka qayb-galin dibad-baxyada looga soo horjeedo. Gabdhahan ayaa reer Puntalnd iyo ummadda Soomaaliyeedba ka codsday in ay ka hadlaan kana dibad-baxaan dhibaatooyinka ay sheegeen in lagu hayo dadka reer Sool.
Somaliland ayaa gacata ku dhigtay inta badan gobolka sool oo ay ku jirto magaaladda xarunta ah ee Laascaanood 15-kii bishii October 2007-dii xiligaasi oo ay awood millatari kagala wareegeen ciidamadii Puntland. Tan iyo wixii xilligaa ka dambeeyay Puntland wax tallaabo ah kama ayan qaadin dib-u-soo celinta gobolka Sool, marka laga reebo hanjabaad iyo baaqyo ay maamulladii kala dambeeyay saxaafadda u mariyeen maamulka Somaliland kagana codsanayeen in uu isaga baxo gobolka.
Dhawaan ayuu madaxwaynaha dawladda Puntland Cabdiraxaman Maxamed Faroole waxa uu markii ugu horaysay lahjad kulul ku sheegay in uu maamulkiisu sii daawan doonin tallaabooyinka Somaliland, waxana uu sheegay in haddii ayan isaga bixin gobollada Sool iyo Cayn ay tallaabo millatari qaadan doonaan. Dadka daggan gobollada Sool iyo Cayn ayaa si wayn ugu dhaliila maamulka Puntland in uunan ka soo bixin waajibkiisii dastuuriga ahaa ee illaalinta xoriyadda shacab iyo karaamada dhuleed ee reer Puntland.
Khadar Cawl Ismaacil.
Xarunta duumada ee gobalka Mudug oo lagu wareejiey wasaarada caafimaadka ee Puntland.
Baahin: Isniin, March 14, Weriye Xaliima Sacdiya ~ Daljir ~ Garowe. Laascaanood: Guddoomiyihii maxkamadda darajada koowaad ee Laascaanood oo la dilay … Muqdisho: Madaxwayne Shariif oo booqday baraha ciidamada islamarkaana bogaadiyay doorka AMISOM … Garbahaaray: Dagaallo kharaar oo ka socda degaanno ka mida gobolka Gedo … Gaalkacyo: Dab qabsaday xero ay daganaayeen barakacayaal, khasaare badanna dhaliyay …